နှာခေါငျး အစာပိုကျ ထညျ့ထားသော လူနာမြား အတှကျ အာဟာရ | OnDoctor
By OnDoctor Editor	 On May 7, 2018 Last updated Jan 18, 2020
နှာခေါင်း အစာပိုက် ထည့်ထားသော လူနာများ အတွက် အာဟာရ
(မြို့ပေါ် က လူနာတွေကတော့ ကျွန်တော်တို့ကို လာပြနေကြပေမယ့် နယ်က လူနာ နှင့် ဆရာ၊ ဆရာမ များ တက်နိုင်သလောက်လေး လူနာရှင်တွေ ကို လင်ဆင့်ကမ်းပေးဖို့ မေတ္တာ ရပ်ခံ အပ်ပါသည်။) ဆေးရုံတွေ မှာ ကြည့်လိုက်ရင် နှာခေါင်း ပိုက်ထည့်ပြီး အစာထည့်နေရတဲ့ လူနာတွေ အများကြီးတွေ့ ရပါလိမ့်မယ်။
တကယ်တမ်း အစာပိုက်လို့ သာပြောတာပါ တော်ရုံတန်ရုံ လူနာရှင်တွေ က ကြောက်ပြီး အစာသိပ်မထည့်ရဲ ကြပါဘူး။ အလွန်ဆုံးမှ နွားနို့လေး ထည့်၊ အာဟာရမှုန့်ဖျော်ထည့်၊ ဆန်ပြုတ် ထည့်တာ လေးတွေ ပဲ လုပ်ကြပါတယ်။
အမှန်ဆိုရင် နှာခေါင်းပိုက်ထည့်ထားတဲ့ သူတွေ လည်း အဓိက အခြေခံ အာဟာရ အနေနဲ့ Carbohydrate (ကစီဓါတ်), Protein (အသားဓါတ်), Fat (အဆီဓါတ်) စတာတွေ အများ နည်းတူလိုအပ်ပါတယ်။ နှာခေါင်း ပိုက်ထဲ ဆန်ပြုတ်တွေ ချည်း ထည့်ရင်လည်း Carbohydrate (ကစီဓါတ်၊ သကြားဓါတ်) တွေ ပဲ များလာပြီး Triglycerides (သွေးတွင်း အဆီ) တွေ များလာပြီး တခြား ဆိုးကျိုးတွေ တောင် ပြန်ပေးနိုင်ပါသေးတယ်။ ပြီးတော့ ပြီးပြည့်စုံ တဲ့ အာဟာရ လည်း မရနိုင်ပါဘူး။ အသားဓါတ် လည်းမရ၊ အဆီဓါတ် လည်းမရ တော့ ကြွက်သားတွေ ဆုံးရှုံးလာတယ်၊ အရိုးပေါ် အရေတင် သလိုတွေ ဖြစ်လာတဲ့ အပြင် အဆီဓါတ်ပါ ချို့တဲ့ လာတော့ အဆီမှာ ပျော်ဝင်တဲ့ ဗီတာမင်တွေ ပါ ချို့တဲ့လာစေပါတယ်။
ဒါဆိုရင် အာဟာရမှုန့်တွေ ဖျော်တိုက်မယ် ဆိုရင်ကော????
တချို့ အာဟာရမှုန့် တွေ မှာ Carbohydrate (ကစီဓါတ်), Protein (အသားဓါတ်), Fat (အဆီဓါတ်) နှင့် ဗီတာမင်၊ သတ္တုဓါတ်တွေ ပါပါတယ်။ နှာခေါင်း ပိုက်ထဲ ထည့်လို့ရလားဆိုတော့ ထည့်လို့ရပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ဈေးကြီးတယ်။ နေ့တိုင်း အချိန်တိုင်း ဒါကို မထည့် နိုင်တော့ ကိုယ့်ဟာ ကိုယ် အကြိမ်ရေ တွေ လျှော့လာတယ်။ နောက်ဆက်တွဲ အကျိုးဆက်ကတော့ လူနာ က စားရမယ့် ပမာဏ မစားဖြစ်တော့ဘဲ အာဟာရ တဖြည်းဖြည်း ချို့တဲ့လာတယ်။ ကျွန်တော် ဆိုလိုတာ က အာဟာရ မှုန့် ထည့်မယ် ဆိုရင်လည်း ကြားဖြတ် အချိန်မှာ ထည့် ပေးလို့တော့ရပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အဓိက ကတော့ ဈေးသက်သာပြီး အာဟာရ ပြည့်ဝ တဲ့ blenderized diet ကို ကျွေးသင့်ပါတယ်။
Blenderized Diet ဆိုတာဘာလဲ????
မိမိအိမ်မှာ ပဲ လုပ်လို့ရတဲ့ နှာခေါင်းပိုက် ထည့်ထားတဲ့ လူနာ အတွက် ဓါတ်ဆာပါ Carbohydrate (ကစီဓါတ်), Protein (အသားဓါတ်), Fat (အဆီဓါတ်) စတာတွေ အချိုး ကျကျပါဝင် တဲ့ အတွက် လူနာတွေ အာဟာရ ပြည့်ပြည့်ဝဝ ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဘာတွေပါဝင် ရမလဲ ဆိုတော့
7. ဆီ စတာတွေ အချိုး ကျကျပါဝင်ပါတယ်။
ကယ်လိုရီ ၁၈၀၀ အတွက် အချိုးအဆ ကတော့
1. ထမင်း – ထမင်းစားဇွန်း မောက်မောက် ၁၂ ဇွန်း
2. ကြက်သား – ၁၅ ကျပ်သား
3. ကြက်ဥ – အနှစ်ပါ ၂ လုံး
4. ကြက်ဥ အကာချည်း – ၆ လုံး
5. ရွှေဖရုံသီး – လက်နှစ်ဆစ် အရွယ် လေးတုံး
6. ငှက်ပျော်သီး သီးမွှေး – နှစ်လုံး
7. သကြား – လက်ဖက်စားဇွန်း ၁ ဇွန်း
8. ဆီ – ထမင်းစားဇွန်း ၂ ဇွန်း
9. ရေ စတာတွေ လိုအပ်ပါတယ်။
1. ကြက်သား၊ ကြက်ဥ၊ ရွှေဖရုံးသီး၊ ငှက်ပျောသီး၊ ဆီ၊ သကြား တို့ကို ရေ ၃၀၀ မီလီလီတာ လောက်နဲ့ ပြုတ်တာ ဖြစ်ဖြစ်၊ microwave ထဲ၊ oven ထဲ ဖြစ်ဖြစ် ထည့်ပြီး ကျက်အောင် ချက်ပါ။
2. ပြီးရင် ထမင်း နဲ့ အခု ချက်ထားပြီးသား ပာာတွေ ကို ရောပြီး အသီးဖျော်စက် ထဲ ထည့်ပြီး ကြိတ်ပါ။
3. အရမ်း ပျစ်နေပါလိမ့်မယ်။ တကယ်ဆိုရင် သူများနိုင်ငံ က ဆေးရုံတွေ မှာ အပျစ်အကျဲ ကို စနစ်တကျ လုပ်ပါတယ်။ ဒါပေမာ့် ကျွန်တော်တို့ ဆီမှာ အိမ်မှာ ပဲ ကိုယ်ထူ ကိုယ်ထ လုပ်ရမှာ ဆိုတဲ့ အတွက် အပျစ် အနေ အထားက ဆိုင်သောက် ထောပတ်သီး ဖျောရည် အနေ အထား လို အရမ်း မပျစ် အရမ်း မကျဲ တဲ့ အခြေအနေ လောက် အထိ ဖြစ်အောင် ခုန က ကြိတ်ထားတဲ့ အနှစ်တွေ ကို ရေနွေး နဲ့ ရောပါ။ အရမ်းလည်း မကျဲ ပါစေ နှင့်။
4. ရ လာတဲ့ အရည် တွေ ကို မနက်စာ နေ့လည်စာ ညစာ ဆိုပြီး သုံးခါ ခွဲ ထည့်ပေးပါ။ ပိုတာ ကို နောက်တနေ့မှာတော့ မသုံးမိပါစေနှင့်။
အရသာ – တချို့က ပြောပါတယ်။ အရသာ ကောင်းပါ့မလားဆိုပြီး မေးပါတယ်။ ဟုတ်ပါတယ် အရသာ လုံးဝ မကောင်းပါ။ ဒါပေမယ့် နှာခေါင်းပိုက်ထည့်ထားတဲ့ လူတစ်ယောက် မှာ အရသာ ကို လည်း သူခံစားရမှာ မဟုတ်တဲ့ အတွက် အရသာ အပိုင်း ကို ထည့်စဉ်းစား စရာ မလိုပါ။
တန်ဖိုး – ကျွန်တော်တွက်ကြည့်တာ လူနာတစ်ယောက် အတွက် အိမ်မှာ ကိုယ်တိုင် လုပ်ရင် သုံးထောင်ကျော်ကျော် လေးပဲ ကျပါတယ်။ အပြင်မှာ အာဟာရ မပြည့်တဲ့ ဆန်ပြုတ်တောင် ငါးရာ တစ်ထောင် ပေးနေမယ့် အစား လူနာ အတွက် အာဟာရ ပြည့်ပြီး မြန်မြန် နလန်ထူ နိုင်မယ့် ဒီလို မျိုးကို ကျွေးသင့်ပါတယ်။
မှတ်ချက် – အခုဖော်ပြထားသည်မှာ အကြမ်းဖျင်း လိုက်လုပ်နိုင်ဖို့ အတွက်သာ ရည်ရွယ်ပါသည်။ ကျောက်ကပ်ရောဂါ ဝေဒနာရှင် တွေ ဆိုရင်တော့ တနေ့တာ သောက်ရမယ့် ရေ ပမာဏ ပေါ် မူတည်ပြီး အမျိုးမျိုး ပြောင်းလဲ နိုင်ပါတယ်။ လူနာ တစ်ဦးချင်းပေါ် ရောဂါ ပေါ် မူတည်ပြီး အပြောင်းအလဲ တွေ ရှိပါသည်။ (ကုန်ပစ္စည်း ကြေညာခြင်း လုံးဝ မဟုတ်ပါ)
(မွို့ပျေါ က လူနာတှကေတော့ ကြှနျတျောတို့ကို လာပွနကွေပမေယျ့ နယျက လူနာ နှငျ့ ဆရာ၊ ဆရာမ မြား တကျနိုငျသလောကျလေး လူနာရှငျတှေ ကို လငျဆငျ့ကမျးပေးဖို့ မတ်ေတာ ရပျခံ အပျပါသညျ။) ဆေးရုံတှေ မှာ ကွညျ့လိုကျရငျ နှာခေါငျး ပိုကျထညျ့ပွီး အစာထညျ့နရေတဲ့ လူနာတှေ အမြားကွီးတှေ့ ရပါလိမျ့မယျ။
တကယျတမျး အစာပိုကျလို့ သာပွောတာပါ တျောရုံတနျရုံ လူနာရှငျတှေ က ကွောကျပွီး အစာသိပျမထညျ့ရဲ ကွပါဘူး။ အလှနျဆုံးမှ နှားနို့လေး ထညျ့၊ အာဟာရမှုနျ့ဖြျောထညျ့၊ ဆနျပွုတျ ထညျ့တာ လေးတှေ ပဲ လုပျကွပါတယျ။
အမှနျဆိုရငျ နှာခေါငျးပိုကျထညျ့ထားတဲ့ သူတှေ လညျး အဓိက အခွခေံ အာဟာရ အနနေဲ့ Carbohydrate (ကစီဓါတျ), Protein (အသားဓါတျ), Fat (အဆီဓါတျ) စတာတှေ အမြား နညျးတူလိုအပျပါတယျ။ နှာခေါငျး ပိုကျထဲ ဆနျပွုတျတှေ ခညျြး ထညျ့ရငျလညျး Carbohydrate (ကစီဓါတျ၊ သကွားဓါတျ) တှေ ပဲ မြားလာပွီး Triglycerides (သှေးတှငျး အဆီ) တှေ မြားလာပွီး တခွား ဆိုးကြိုးတှေ တောငျ ပွနျပေးနိုငျပါသေးတယျ။ ပွီးတော့ ပွီးပွညျ့စုံ တဲ့ အာဟာရ လညျး မရနိုငျပါဘူး။ အသားဓါတျ လညျးမရ၊ အဆီဓါတျ လညျးမရ တော့ ကွှကျသားတှေ ဆုံးရှုံးလာတယျ၊ အရိုးပျေါ အရတေငျ သလိုတှေ ဖွဈလာတဲ့ အပွငျ အဆီဓါတျပါ ခြို့တဲ့ လာတော့ အဆီမှာ ပြျောဝငျတဲ့ ဗီတာမငျတှေ ပါ ခြို့တဲ့လာစပေါတယျ။
ဒါဆိုရငျ အာဟာရမှုနျ့တှေ ဖြျောတိုကျမယျ ဆိုရငျကော????
တခြို့ အာဟာရမှုနျ့ တှေ မှာ Carbohydrate (ကစီဓါတျ), Protein (အသားဓါတျ), Fat (အဆီဓါတျ) နှငျ့ ဗီတာမငျ၊ သတ်တုဓါတျတှေ ပါပါတယျ။ နှာခေါငျး ပိုကျထဲ ထညျ့လို့ရလားဆိုတော့ ထညျ့လို့ရပါတယျ။ ဒါပမေယျ့ ဈေးကွီးတယျ။ နတေို့ငျး အခြိနျတိုငျး ဒါကို မထညျ့ နိုငျတော့ ကိုယျ့ဟာ ကိုယျ အကွိမျရေ တှေ လြှော့လာတယျ။ နောကျဆကျတှဲ အကြိုးဆကျကတော့ လူနာ က စားရမယျ့ ပမာဏ မစားဖွဈတော့ဘဲ အာဟာရ တဖွညျးဖွညျး ခြို့တဲ့လာတယျ။ ကြှနျတျော ဆိုလိုတာ က အာဟာရ မှုနျ့ ထညျ့မယျ ဆိုရငျလညျး ကွားဖွတျ အခြိနျမှာ ထညျ့ ပေးလို့တော့ရပါတယျ။ ဒါပမေယျ့ အဓိက ကတော့ ဈေးသကျသာပွီး အာဟာရ ပွညျ့ဝ တဲ့ blenderized diet ကို ကြှေးသငျ့ပါတယျ။
မိမိအိမျမှာ ပဲ လုပျလို့ရတဲ့ နှာခေါငျးပိုကျ ထညျ့ထားတဲ့ လူနာ အတှကျ ဓါတျဆာပါ Carbohydrate (ကစီဓါတျ), Protein (အသားဓါတျ), Fat (အဆီဓါတျ) စတာတှေ အခြိုး ကကြပြါဝငျ တဲ့ အတှကျ လူနာတှေ အာဟာရ ပွညျ့ပွညျ့ဝဝ ရမှာ ဖွဈပါတယျ။ ဘာတှပေါဝငျ ရမလဲ ဆိုတော့
7. ဆီ စတာတှေ အခြိုး ကကြပြါဝငျပါတယျ။
ကယျလိုရီ ၁၈၀၀ အတှကျ အခြိုးအဆ ကတော့
1. ထမငျး – ထမငျးစားဇှနျး မောကျမောကျ ၁၂ ဇှနျး
2. ကွကျသား – ၁၅ ကပျြသား
3. ကွကျဥ – အနှဈပါ ၂ လုံး
4. ကွကျဥ အကာခညျြး – ၆ လုံး
5. ရှဖေရုံသီး – လကျနှဈဆဈ အရှယျ လေးတုံး
6. ငှကျပြျောသီး သီးမှေး – နှဈလုံး
7. သကွား – လကျဖကျစားဇှနျး ၁ ဇှနျး
8. ဆီ – ထမငျးစားဇှနျး ၂ ဇှနျး
9. ရေ စတာတှေ လိုအပျပါတယျ။
1. ကွကျသား၊ ကွကျဥ၊ ရှဖေရုံးသီး၊ ငှကျပြောသီး၊ ဆီ၊ သကွား တို့ကို ရေ ၃၀၀ မီလီလီတာ လောကျနဲ့ ပွုတျတာ ဖွဈဖွဈ၊ microwave ထဲ၊ oven ထဲ ဖွဈဖွဈ ထညျ့ပွီး ကကျြအောငျ ခကျြပါ။
2. ပွီးရငျ ထမငျး နဲ့ အခု ခကျြထားပွီးသား ပာာတှေ ကို ရောပွီး အသီးဖြျောစကျ ထဲ ထညျ့ပွီး ကွိတျပါ။
3. အရမျး ပဈြနပေါလိမျ့မယျ။ တကယျဆိုရငျ သူမြားနိုငျငံ က ဆေးရုံတှေ မှာ အပဈြအကြဲ ကို စနဈတကြ လုပျပါတယျ။ ဒါပမေျာ့ ကြှနျတျောတို့ ဆီမှာ အိမျမှာ ပဲ ကိုယျထူ ကိုယျထ လုပျရမှာ ဆိုတဲ့ အတှကျ အပဈြ အနေ အထားက ဆိုငျသောကျ ထောပတျသီး ဖြောရညျ အနေ အထား လို အရမျး မပဈြ အရမျး မကြဲ တဲ့ အခွအေနေ လောကျ အထိ ဖွဈအောငျ ခုန က ကွိတျထားတဲ့ အနှဈတှေ ကို ရနှေေး နဲ့ ရောပါ။ အရမျးလညျး မကြဲ ပါစေ နှငျ့။
4. ရ လာတဲ့ အရညျ တှေ ကို မနကျစာ နလေ့ညျစာ ညစာ ဆိုပွီး သုံးခါ ခှဲ ထညျ့ပေးပါ။ ပိုတာ ကို နောကျတနမှေ့ာတော့ မသုံးမိပါစနှေငျ့။
အရသာ – တခြို့က ပွောပါတယျ။ အရသာ ကောငျးပါ့မလားဆိုပွီး မေးပါတယျ။ ဟုတျပါတယျ အရသာ လုံးဝ မကောငျးပါ။ ဒါပမေယျ့ နှာခေါငျးပိုကျထညျ့ထားတဲ့ လူတဈယောကျ မှာ အရသာ ကို လညျး သူခံစားရမှာ မဟုတျတဲ့ အတှကျ အရသာ အပိုငျး ကို ထညျ့စဉျးစား စရာ မလိုပါ။
တနျဖိုး – ကြှနျတျောတှကျကွညျ့တာ လူနာတဈယောကျ အတှကျ အိမျမှာ ကိုယျတိုငျ လုပျရငျ သုံးထောငျကြျောကြျော လေးပဲ ကပြါတယျ။ အပွငျမှာ အာဟာရ မပွညျ့တဲ့ ဆနျပွုတျတောငျ ငါးရာ တဈထောငျ ပေးနမေယျ့ အစား လူနာ အတှကျ အာဟာရ ပွညျ့ပွီး မွနျမွနျ နလနျထူ နိုငျမယျ့ ဒီလို မြိုးကို ကြှေးသငျ့ပါတယျ။
မှတျခကျြ – အခုဖျောပွထားသညျမှာ အကွမျးဖငျြး လိုကျလုပျနိုငျဖို့ အတှကျသာ ရညျရှယျပါသညျ။ ကြောကျကပျရောဂါ ဝဒေနာရှငျ တှေ ဆိုရငျတော့ တနတေ့ာ သောကျရမယျ့ ရေ ပမာဏ ပျေါ မူတညျပွီး အမြိုးမြိုး ပွောငျးလဲ နိုငျပါတယျ။ လူနာ တဈဦးခငျြးပျေါ ရောဂါ ပျေါ မူတညျပွီး အပွောငျးအလဲ တှေ ရှိပါသညျ။ (ကုနျပစ်စညျး ကွညောခွငျး လုံးဝ မဟုတျပါ)
ညဘကျသှားကွိတျတတျတဲ့သူတှေ အသုံးပွုသငျ့တဲ့ Nightguard
မမေဖေနျတီးပေးတဲ့ အာဟာရအပွညျ့နဲ့ မိသားစု ထမငျးဝိုငျးလေး